कुराकानी Archives - Page 14 of 14 - Samudrapari.com
मैले किन क्षमा माग्ने ? : सभासद् साह
सञ्जयकुमार साह । धनुषा क्षेत्र नम्वर ४ बाट संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी भएपछि काठमाडौं छिरेका उनी कुनै न कुनैरुपमा चर्चामा रहन्छन् । मधेसी जनअधिकार फोरमबाट निर्वाचित यी युवा सभासद् विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वमा विभाजित भएर बनेको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)मा गए । लगत्तै गच्छदारले नै सम्हालेको भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री भए उनी । मन्त्री छँदै मधेस क्रान्ति फोरमको अध्यक्ष पनि भए उनी । तर साह क्रान्ति फोरम राजनीतिक संगठन नभएको दाबी गर्दै भन्छन्– ‘यो विशुद्ध सामाजिक संगठन हो, यसमा जुन...
एनआरएनको यो कार्यसमितिलाई काम गरेरै देखाउने चुनौती छ
० अब देशमा लगानीको ओईरो लाग्छ ० मातृभूमिका लागि असजिलो अवस्थामा काम गर्ने भनेको रगतको नाता र माटोको माया भएकाहरुले नै हो ० हामी एनआरएनहरुले देशभित्र रहनुभएका नेपालीहरुसँग मिलेर नै समृद्ध नेपालको कल्पना गर्न सक्छौं - भवन भट्ट, कोषाध्यक्ष, एनआरएन आईसीसी बिश्वभरि छरिएर रहेका लाखौं नेपालीहरुलाई समेट्दै आ–आफ्नो ठाउँ र हैसियतबाट मुलुक र मुलुकबासीको समृद्धिका लागि क्रियाशील रहेर सक्दो भूमिका निर्बाह गर्ने बिश्वब्यापी साझा अभियानको नाम हो एनआरएन । नयाँ नेतृत्व र नयाँ कार्यकालको लागि आर्थिक ...
‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुपर्ने बाध्यता बन्योः रायमाझी
टोपबहादुर रायमाझी स्थानीय विकास मन्त्री एवं माओवादी स्थायी समिति सदस्य हुन् । माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सुरुदेखि नै पहल गर्नेमा उनी पनि थिए । सुरुमा केही राम्रा काम गरे पनि भट्टराई सरकार पछिल्ला केही काममा भने चुकेको छ । ४९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेर विरोध खेपेको भट्टराई सरकारबारे रायमाझीसँग गरिएको कुराकानी- जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर कसरी भयो मितव्ययिता ? - नेपाली जनता र राष्ट्रका लागि मुख्य कुरा मितव्ययिता भन्दा पनि शान्ति र संविधान हो । शान्ति र संविधानल...
दुई देशबीचका आशंका मेटाएँ : प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई
निर्वाचित भएको तीन महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पहिलो राजनीतिक भ्रमण (यसलाई उनले सदभावना भ्रमणमात्र भने पनि) गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण (३ कात्तिकदेखि ६ गतेसम्म) हतारमा भएकोमा विभिन्न आशंका थिए, प्रतिपक्षीमात्रै नभइ स्वयं माओवादीबाट पनि । तर उनको भित्रि मनशाय भने एउटै थियो, त्यो हो माओवादीसँग रहेको भारतीय आशंका हटाउनु । प्रधानमन्त्री यो आशंका चिर्न सफल भएका छन् । भ्रमणमा तीनवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहसहितको उपस्थितिमा प्रधान...
संयुक्त आवासको घर सस्तो र २० गुणा वैज्ञानिक
इच्छाराज तामाङ अध्यक्ष, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ इन्जिनियरिङ कलेजमा प्राध्यापन गर्दै आएका इच्छाराज तामाङको नेतृत्वमा प्राज्ञिक पृष्ठभूमि भएका केही व्यक्तिहरूको सहभागितामा एक दशकअघि सुरु भएको सिभिल समूह अहिले देशको उदीयमान व्यावसायिक संस्था र व्यवस्थित आवासको क्षेत्रमा पायोनियर कम्पनी भइसकेको छ । सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सहकारी लिमिटेडबाट काम सुरु गरेको सिभिल समूहले भैंसेपाटीमा एक दशकअघि २५ रोपनी जग्गामा ५६ घर बनाएर घरजग्गा व्यवसायमा हात हालेको थियो । समयक्रमसँगै यो क्षेत...